ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “၀ါးဟားဟားဟား”
အောက်ကပုံမှာ ဘယ်ဟာက တာရားရစ် (စ်) လဲ ဟင် အစွပ်ကြီးတွေနဲ့ဟာလား....ခွိခွိ
"အမှန်တကယ်တော့ ထိုသူ လွတ်မြောက်ထွက်ပြေးသွားခြင်းသည် အင်မတန် အန္တရာယ်များသည့် ကိစ္စဖြစ် သည်။ မထင်မှတ်သောသူများကို ဓါးစားခံ လုပ်နိုင်သည်။ လူစည်ကားရာနေရာများတွင် အန္တရာယ်ပေးနိုင်သည်။ လုံခြုံရေး အင်မတန်ပေါ့လျော့သည်ဟု ဆိုရပေမည်။"
ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ပေါ့လျော့မှူ။ သိပ်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကို တပြိုင်တည်း ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ထိ အန္တရာယ်ကြီးလွန်းတယ်။
လာဖတ်သွားတယ်ဗျာ။ :-D :-D :-D
THESE ARE THE QUESTION NOW EVERONE IS ASKING:=
1) did he really escape?
2) is he still alive ?
4) can his family demand for him?
5) what is the proof that he escaped?
6) if he did escape -how?
7) did the jamban haveadug up hole that leads to Timbuktu?
8) who was involved in his escape?
9) what 's the deal actually?
10) did Mas Selamat have an supernatural power?
အဟားဟား ကိုပေါပြောတာ ရေလည်ကြိုက်တယ်ဗျို့ .. အဲဒီသတင်းကြားကြားချင်း ကျွန်မလည်း တော်တော်အံ့သြသွားတယ်။ လုံခြုံရေးမှာ နာပါတ်တစ်လို့ သိထားတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်သွားတော့ ပိုမိုအံ့သြမိတာပေါ့။ အင်မတန်အန္တရာယ်များသော အမှုကြီးတစ်ခုပါ ။ စလုံးရဲတွေက ထောက်လှမ်းစုံစမ်း ၊ လိုက်ရှာတဲ့နေရာမှာ တော်ပုံမျိုးနဲ့တော့ ဒုက္ခတော့များမှာ မြင်ယောင်နေမိပါသေးတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သွားတာ လာတာ အားလုံးသတိထားကြဖို့ပဲ အကြံပြုချင်ပါတယ် ။
အူတူတူ စလုံးရဲတွေတော့ပြာနေပြီ အရည်အချင်းက အပြည့်ဆိုတော့ ခုလောက်ဆိုရင် ဝန်ကြီးချုပ်နား ရောက်နေလောက်ပြီ။
အတော်ပဲ နောက်ဆိုရင် တေဇအဆက်အနွယ်တွေကို ဆော်ပလော်တီးလို့ရပြီဗျို့
တားတားက မုတ်ဆိတ်မွှေးနဲ့ဆို ကြောက်တတ်လွန်းလို့ပါ.. ဟီး
အေးဗျာ.. ဒီတစ်ခါတော့ ရေရေလည်လည် ရှက်ဖွယ်လိလိပဲ
စလုံးရဲတွေက ကိုပေါတို့ လင်းလက်တို့ကို စစ်မေး ဟိန်းဟောက်တဲ့ နေရာမျိုးတင်မက တကယ်အန္တရာယ်များတဲ့ လူကို မိအောင်ဖမ်းတဲ့နေရာမှာလည်း (သူတို့ပြောပြောနေသလို) efficient ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြရတော့မှာပဲ။ တော်ကြာနေ ဟို index ဒီindex တွေမှာ ထိပ်ဆုံးက နေရာယူထားတာ တဟုန်ထိုး ကျနေပါဦးမယ်။
၅ ရက်တောင် ရှိပြီဗျို့... မိတော့မှာ ဟုတ်ပါဘူး။။။ စင်္ကာပူကြီး အကြီးအကျယ် အရှက်ကွဲခြင်းပေါ့။ ဒါတောင် ဒီနေ့သတင်းစာထဲမှာ အပြောက မလျှော့သေးဘူး။ =))
ဒီလူက--တကဘာလုံးရဲ့ criminal ပဲ --ဒီလူဘာလုပ်တယ်ဆိူတာတကဘာလုံးသိတယ်
ဟုတ်ပ။ ကျွန်တော် သတင်းစာမှာ ဖတ်လိုက်ရတာကို ပြောရအုန်းမယ်။ အလကားရတဲ့ သတင်းစာက ပေးစာနေရာမှာ ရေးထားတာ။ သူတို့ ၀န်ကြီးက တောင်းပန်တဲ့အကြောင်းလေ။ အဲဒီလို တောင်းပန်တာဟာ တော်ရုံခေါင်းဆောင်တွေက မတောင်းပန်ဖူးဘူး။ အမေရိကန်က ဘယ်သမ္မတက ဘယ်တုန်းက တောင်းပန်ဖူးတာ။ ဘယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းက ဘယ်တုန်းက တောင်းပန်ဖူးတာနဲ့ ရေးပြီး အခုလို သူတို့ ၀န်ကြီးက တောင်းပန်တာဟာ အလွန်ကို လေးစားစရာ ကောင်းတဲ့ အကြောင်းတွေ ရေးထားတာ။ မရယ်ရဘူးလား။ ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ လှေလူးကတော့ လိုက်ပါ့ဗျာ။ စလုံးတွေ ရူးပုံက အဲဒီလို...
မြန်မာစစ်အဆိုးရ လို ရိုက်စစ်ရင်းနဲ့ လက်လွန်ခြေလွန်ဖြစ်ပြီး သေသွား လို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ ပြောတာလား?? ဒါမှမဟုတ် လူတွေကို တမင်သက်သက် စိတ်ပြောင်းအောင်လုပ်တာဘဲလား??
စ လုံး အစီုးရ လဲ မြန်မာစစ်အဆိုးရ နှင့် သိပ်မကွာပါ။ ယုံ လို့ မရပါ ။